Emva intlungu uncedo stencils acoustic iliza shockwave therapy umatshini njengoko-eswt-Physical therapy umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
IKHAYA>IMVELISO>Umatshini wonyango lomzimba
Umgaqo wonyango weShockwave
Isixhobo sonyango se-shockwave sisekeke kwitekhnoloji yamaza ombane ongasetyenziswanga ophantsi, olu luhlobo lwamandla acoustic othwala amandla aphezulu kwiindawo ezibuhlungu kunye ne-fibrous okanye i-myoskeletal tishu ene-subacute, subchronic kunye neemeko ezingapheliyo. La mandla akhuthaza ukuphilisa, ukuvuselela kunye neenkqubo eziphindaphindiweyo zee-tendon kunye nezicubu ezithambileyo. Amaza emitha engafunekiyo esetyenzisiweyo engasetyenziswanga ibonakalise ukuba nefuthe elikhulu kulwakhiwo lwe-collagen kunye nezicubu ezichaphazela ulusu, ukuphucula ukuhamba kwegazi kunye nemetabolism yeeseli zamafutha. Ukusebenza kwemisipha yokuthomalalisa kunciphisa i-edema kunye nokuphucula ukuntywila kwe-lymphatic drainage. Ivuselela ukwakheka kwe-collagen, ngelixa ulusu luqina ngakumbi kwaye ukuqina kwalo kubonakala emva konyango oluncinci.
Yothuswa njani isuse i-cellulite?
I-Extracorporeal Shock Waves Therapy (ESWT), ekhupha iiplags kwaye idale ukunyakaza okuhlasela imijikelezo ejikeleze iidipozithi zamafutha phantsi kwesikhumba. Yindlela yokuvula kunye nokuqhekeza imicu kunye nokukhupha amafutha, amanzi kunye neetyhefu. Kwangexesha elinye ukuvelisa imveliso ye-collagen fibers entsha ekhutheleyo nenempilo kwaye ubuyisela ngokuthe ngcembe amandla kunye nolusu lolusu.
Ngamaza akhawulezisa ukujikeleza kwegazi kunye nokunye okuninzi kweoksijini kunye nezakha mzimba ukufikelela kwezi ndawo. Isiphelo sisiphumo esithobekileyo kwaye siluqilima kwaye siluqilima.
Unyango lwe-Myofascial trigger point therapy kumva kunye namagxa
I-Periostitis / ii-shin splints (imeko emva kokugcwala kakhulu)
I-Thumb basal edibeneyo isifo samathambo / isifo sentliziyo
Ukulimala kwezemidlalo Iinowuthascial trigger point
I-Heel spurs Radial kunye ne-ulnar epicondylitis, i-tennis elbow
I-Tendinitis yengxaki yegxa / yamagxa
I-calcific tendinitis yegxa
Ubume bokulimala kwemisipha Patellar tendinitis
I-Patellar tendinopathy Achillodynia Plantar fasc11tis
Ukuvuselela umzimba kwakhona unyango lwe-anti-cellulite
Unyango lokungahambi kakuhle kolusu emva kokuphuculwa kolusu
Ukuqina kwezicubu okuqinisa isikali kunye nokusongeleka okubushelelezi
Ukucuthwa kwamanqaku olwandiso lwenkqubo yokuvuselela
1. Ukusebenza okuphezulu, ukunciphisa iintlungu ngokukhawuleza
2. Ukungafakwisi, akukho anesthetic, kulula kwaye kuyakhawuleza
3. Unesi ngamnye kuphela imizuzu eli-10, u-5 - 10 wokukhulisa iseshini nganye
4. Isetyenziswa ngokufanelekileyo kunyango lweethishu ezahlukeneyo
Uyilo oluphathekayo lomatshini oludwebekayo
Amandla amakhulu: ukuya kwi-2 Bar, 6Hz
Ukuseta kwangaphambili ipharamitha kunye nesethingi yencwadi
Isiphatho sesibane se-aluminiyamu: kulula ukuyisebenzisa, gcina iindleko kulondolozo
5.I-compressor yomoya eyakhelweyo eyakhelwe-ngaphakathi, ezinzileyo ngakumbi namandla ombane athelekisa i-electro-magnetic shockwaves
I-6.4,000,000 shots yesandla
I-7.5 isiqwenga somsebenzi osetyenziswayo (F15 ngokuzikhethela)
Iiseti ze-8.2 ze-barrel kunye neebhulethi ziqinisekisa i-2,000,000 shots
I-8.4 intshi inyani yokuchukumisa umbala
I-1 - 20 Hz, inyathela kwi-1Hz
I-1 - 6.0 Ibha, ukunyuka kwi-0.1Bar
5 transmitters (A6/D15/R15/D20/D35) F15 ngokuzikhethela